Ingqwalasela kunye neMbali yeCompass
by Xanthe Webb Aintablian, Umbhali oNcedisayo
Ikhampasi isixhobo esisetyenziselwa ukuhamba; Ngokuqhelekileyo inaliti yamagnetic ekhomba kwi-Earth Pole magnetic . Ikhampasi yamagneti sele ikhona malunga neyure leminyaka kwaye iyona uhlobo oluqhelekileyo lwekhampasi. Ikhampasi ye-gyroscopic ayiqhelekanga kakhulu kunekhampasi yamagnetic.
I-magnetic compasses, uhlobo olulula kakhulu noluneqhelekileyo lwekhampasi, luhambelaniswe nomhlaba wamandla ombane. Ezi nkomfa zikhokelela kuMbane weNtshonalanga yeMandla. (I-North Magnetic North Pole ihlala kumpuma kweCanada kodwa iyaqhubeka ishukunyiswa, kodwa ihamba ngokukhawuleza.) Ii-compasses ezimangalisayo zilula, zixhobo zakha ngokulula, kodwa kufuneka zifakwe ngokupheleleyo kwiqonga, zifuna ixesha elithile ukulungelelanisa kwipulatifomu, kwaye inokuphazamiseka kwimimandla yamandla asekuhlaleni.
Ukuze uhlengahlengise ikhampasi yamagnetic kwiindawo ezisemgangathweni okanye ezisekhompuma nakwiiNdawo eziMntla , kufuneka umntu azi isixa semitha okanye ukuhluka okukhoyo kwindawo ethile. Kukho imephu ekhompyutheni kunye nebalawuli ezikhoyo ezibonelela umahluko phakathi kokunyuka kwetyala elingasenyakatho kunye nombane osempumalanga kuyo yonke indawo kwihlabathi. Ngokulungelelanisa ikhampasi yamagnetic esekelwe ekuhlaleni kombane, kunokwenzeka ukuba kuqinisekiswe ukuba izikhokelo zomntu zichanekile.
Iifomasi ze-Gyroscopic zihambelaniswe neNyakatho yePole kwaye zine inaliti ejikelezayo ngokumalunga nokujikeleza komhlaba. Zisoloko zisetyenziselwa iinqanawa okanye iinqwelo-moya ukwenzela ukuba nayiphi na isistim sombane sisiphazamise ukuhamba. Ngako oko, banokukhawuleza ukulungelelanisa ukuhamba. Olu hlobo lwekhampasi luhlala lubekwe kwiindawo ezingasenyakatho, ngokusekelwe kwinqanaba lekhampasi yamagnetic, kwaye emva koko ihlolwe ngekhampasi yamagnetic ukuqinisekisa ukuchaneka.
Iikhosesi zokuqala zazivezwe yiTshayina malunga no-1050 BCE. Ziye zadalwa kuqala kwiinjongo zobomi bokomoya okanye ziphuhlisa imvelo ye-feng shui kwaye kamva zisetyenziselwa ukuhamba. Kuphikisana nokuba ezinye iinkcubeko, njengamanye amazwe aseMesoamerican, ziye zavelisa ingcamango yekhampasi egunyazisiweyo kuqala, ngokunjalo ngokuhambelana ngokomoya kunye nokuhamba.
Ii-Compasses zaqulunqwa ekuqaleni xa kufakwa iifesones, i-mineral ekhutshwe nge-ore yenziwe nge-iron ore, yaxinwa ngaphezu kwebhodi enekhono lokujika kunye nokujika. Kwafunyaniswa ukuba amatye ayeza kuhlala ekhokelela kwinqanaba elifanayo, kwaye ahambelane nomxhaka we-north / south of the earth.
Ikhampasi iphakanyisiwe yinkcazo yokuqhelaniswa kunye nolwalathiso olubekwa kwiikhomputha, iimaphu kunye neetshathi. Amanqaku angamashumi amathathu anamabini aboniswe ngeenxa zonke kwisangqa, ukumakisha izikhombisi ezine ezikhawulezileyo (N, E, S, W), ezine zikhokelo ze-intercardinal (NE, SE, SW, NW), kunye nezinye izikhokelo eziphakathi neshumi nesithandathu ( NE ngeN, N nge-E, njl.).
Amaphuzu angama-32 ayedalwe ekuqaleni ukubonisa imimoya kwaye ayetyenziswe ngabashenxisi ekuhamba. Amaphuzu angama-32 amele iimoya ezisibhozo ezinkulu, iinqununu zemi-moya, kunye nee-wind-16.
Wonke amaphuzu angama-32, ama-degrees abo, kunye namagama abo atholakala kwi-intanethi.
Kwi-compass yokuqala, i-winds eyisibhozo ingabonwa ngencwadi yokuqala ngenqakrazo yokumakisha igama layo, njengoko sikwenza ngeN (ngasentla), E (empuma), S (ngasezantsi), kunye neW (entshona) namhlanje. Kamva i-compass i-roses, malunga nexesha loPhando lwesiPutukezi kunye noChristopher Columbus, ibonisa i-fleur-de-lys esikhundleni sencwadi yokuqala T (i-tramontana, igama lomoya wasentla) elibhekise ngasentla, kwaye umnqamlezo uthatha indawo yokuqala yeleta L ( for levante) ephawulwe empuma, ibonisa isiXeko seNgcwele.
Sisoloko sibona i-fleur-de-lys kunye nemiqondiso yomnqamlezo kwi-roses i-roses namhlanje, ukuba kungekhona nje okokuqala iileta zokuqala zezikhokelo zamakhadidi. Yonke i-cartographer icwangcisa icompass iphakame kancane, isebenzisa imibala eyahlukeneyo, imifanekiso, kunye nemiqondiso.
Imibala emininzi idla ngokusetyenziswa nje njengendlela yokwazi ukwahlula amanqaku amaninzi kunye nemigca kwikhampasi.
Uninzi lweenkomfa zanamhlanje zisebenzisa i-360-degree system ebonisa isikhokelo kwi-khampasi nge-zero kunye nama-degrees angama-360 abamele ngasentla, ama-degrees angama-90 amela ngasempumalanga, ama-degrees angama-180 amela ngasemzantsi, kunye nama-degrees angama-270 emele entshonalanga. Ngokusebenzisa i-degrees, ukuhamba ngokuchanekileyo kuchanekile kunokuba kusetyenziswe ikhampasi.
Uninzi lwabantu basebenzisa icompass ngokukhawuleza, ngokukodwa ukuhamba okanye ukukhwela. Kuloo meko, iifomasi ezisisiseko ezifana nekhampasi yesithupha okanye ezinye iikhampasi ezicacileyo kwaye ziyakwazi ukufunda kwimephu zifanelekile. Iindlela ezininzi eziqhelekileyo apho ukuhamba ngaphaya komgama omfutshane kufuna iimpawu eziphambili zeendlela zokukhawuleza kunye nenqanaba lokuqonda. Ukuhamba ngokuhamba phambili, apho iindawo ezikude zifihliwe kwaye ukuhluka okuncinci kwee-degrees kuya kuthoba ikhosi yakho, ukuqonda okucace ngakumbi kokufunda kwekhampasi kuyadingeka. Ukuqonda ukunyuka, i-angle phakathi komntla onyanisekileyo kunye nomntla wamantla, ama-mark degree angama-360 kwi-compass ubuso, kwaye i-direction-direction-direction-arrow edibaniswe nemiyalelo yekhampasi nganye idinga ukufundisisa okuphambili. Ngokulula, ukulula ukuyiqonda, imiyalelo yabaqalayo malunga nendlela yokufunda ikhampasi, tyelela icompassdude.com.
Ibhola laseBrithani kunye neBhola laseMerika: Xa kwakukho amabini amabhola eG Golf
I-Forms Distribution Form
I-Biography kaSirk Clough Williams-Ellis
Iseluleko kuLutsha, ngo-Mark Twain
Iyini indlu yasePim? Ikhaya lasebusika kwiiNkokeli zethu zakudala
Inkcazo kunye nemizekelo ye-Apophasis kwi-Rhetoric
Yiyiphi iMali eNgeniso kwiMicroeconomics?